गुगल कागजातहरू प्रयोग गरेर तपाईको ईबुक कसरी डिजाईन गर्ने, लेख्ने र प्रकाशन गर्ने Martech Zone
कसरी Google कागजात प्रयोग गरेर तपाईंको Ebook डिजाईन, लेख्न र प्रकाशन गर्न
शनिबार, जनवरी 9, 2021 शनिबार, जनवरी 9, 2021 Douglas Karr
यदि तपाईं ई-पुस्तक लेख्ने र प्रकाशन गर्ने सडकमा जानुभएको छ भने, तपाईंलाई EPUB फाईल प्रकारहरू, रूपान्तरणहरू, डिजाइन र वितरणको साथ गडबडी थाहा छ हृदयको बेहोशको लागि होईन। त्यहाँ धेरै ईबुक समाधानहरू छन् जुन प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई मद्दत गर्दछ र गुगल प्ले पुस्तकहरू, किन्डल र अन्य उपकरणहरूमा तपाईंको ईबुक प्राप्त गर्दछ।
ईबुक्स कम्पनीहरूका लागि आफ्नो स्थानमा तिनीहरूको अधिकार स्थिति राख्नको लागि उत्तम तरीका हो र अवतरण पृष्ठहरू मार्फत सम्भावित जानकारी क्याप्चर गर्ने उत्तम तरिका। ईबुक्सले साधारण सेतो कागज वा इन्फोग्राफिकको सिंहावलोकन भन्दा गहन जानकारी प्रदान गर्दछ। ईबुक लेख्दा पनि गुगल, अमेजन र एप्पलको ईबुक वितरण च्यानल मार्फत पूरै नयाँ श्रोता खोल्छ।
त्यहाँ निर्णय निर्माताहरु को एक टन छन् बाहिर तपाइँको उद्योग को लागी विषयहरु को लागी खोज र सम्बन्धित ebooks पढ्ने। के तपाईंको प्रतिस्पर्धी पहिले नै त्यहाँ छन्? त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाईं एक राम्रो को लागी खोज्न सक्नुहुन्छ र शीर्षक जुन तपाईं प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ कि अरु कसैसँग छैन।
सबै भन्दा राम्रो, तपाईं एक ebook डिजाइन, मार्केटिंग, र पदोन्नति सेवा भाँडामा लिनु पर्दैन… तपाईं नयाँ कागजात प्रयोग गरेर मात्र खोल्न सक्नुहुनेछ तपाईंको गुगल कार्यक्षेत्र खाता र डिजाईन गर्न, लेख्न, र निर्यात गर्न सुरू गर्नुहोस् तपाईंले आवश्यक ई-मेल प्रकाशन गर्न को लागी आवश्यक ई-मेल प्रकाशन गर्नुहोस्।
तपाईंको Ebook प्रकाशन गर्न कदमहरू
मलाई विश्वास छैन कि कुनै अन्य पुस्तकको रूपमा ईबुक लेख्ने रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ ... चरणहरू पर्यायवाची छन्। कर्पोरेट ईबुकहरू छोटो, अधिक लक्षित हुन सक्छ, र तपाइँको विशिष्ट उपन्यास वा अन्य पुस्तक भन्दा एक विशेष लक्ष्य प्रदान गर्न। तपाईं आफ्नो डिजाइन, तपाईंको सामग्रीको संगठन, र तपाईंको पाठकलाई अर्को चरण लिनको लागि उत्प्रेरित गर्ने क्षमतामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईंको पुस्तक योजना गर्नुहोस् - मुख्य शीर्षकहरू र उप-विषयवस्तुहरू प्राकृतिक रूपमा तपाइँको पाठकलाई सामग्री मार्फत मार्गदर्शन गर्न व्यवस्थित गर्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा, मैले मेरो पुस्तकमा फिसबोन रेखाचित्र बनाएर त्यसो गरें।
तपाईंको लेखन योजना गर्नुहोस् - अनुरूप अनुभाग, verbiage, र दृष्टिकोण को दृश्य (पहिलो, दोस्रो, वा तेस्रो व्यक्ति)।
तपाईंको ड्राफ्ट लेख्नुहोस् - समय र लक्ष्यहरूको योजना बनाउनुहोस् कसरी तपाईं आफ्नो पुस्तकको पहिलो ड्राफ्ट पूरा गर्नुहुन्छ।
तपाईंको व्याकरण र हिज्जे जाँच गर्नुहोस् - तपाइँ एकल ईबुक वितरण वा प्रकाशित गर्नु अघि, महान सम्पादक वा सेवा जस्तो प्रयोग गर्नुहोस् Grammarly कुनै पनि हिज्जे वा व्याकरण गल्तीहरू पहिचान गर्न र सुधार गर्न।
प्रतिक्रिया लिनुहोस् - तपाईको ड्राफ्ट वितरित गर्नुहोस् (गैर प्रकटीकरण सम्झौताको साथ) विश्वसनीय स्रोतहरूमा जो मस्यौदामा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न सक्दछ। भित्र वितरण गर्दै Google कागजात उत्तम छ किनकि व्यक्तिले इन्टरफेसमा सीधा टिप्पणीहरू थप्न सक्दछ।
तपाईको ड्राफ्ट संशोधित गर्नुहोस् - प्रतिक्रिया प्रयोग गरेर, तपाईंको ड्राफ्ट संशोधित गर्नुहोस्।
तपाईंको ड्राफ्ट बढाउनुहोस् - तपाईं आफ्नो प्रतिलिपि भर सुझाव, संसाधन, वा तथ्या include्क समावेश गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको आवरण डिजाइन गर्नुहोस् - एक महान ग्राफिक डिजाइनर को सहायता लिनुहोस् र केहि फरक संस्करणहरू सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईको नेटवर्कलाई सोध्नुहोस् जुन सब भन्दा बाध्यकारी हो।
तपाईंको प्रकाशन मूल्य - तपाईको जस्तै अरू ई-पुस्तकहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् कि उनीहरूले कति बेच्दैछन्। तपाईले सोच्नुभयो कि नि: शुल्क वितरण तपाईको जाने बाटो हो - यसलाई बेच्न यसले यसलाई अधिक प्रामाणिकता ल्याउन सक्छ।
प्रशंसापत्र स Collect्कलन गर्नुहोस् - केहि प्रभावकर्ताहरू र उद्योग विशेषज्ञहरू फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंको ईबुकको लागि प्रशंसापत्र लेख्न सक्छ - सायद नेताबाट अगाडि नै। तिनीहरूको प्रशंसापत्र तपाईंको ebook मा विश्वसनीयता थप्नेछ।
तपाईको लेखक खाता बनाउनुहोस् - तल तपाईंले मुख्य खाताहरू लेखक खाताहरू र प्रोफाइल पृष्ठहरू सिर्जना गर्न पाउनुहुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो ebook अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ।
एक भिडियो परिचय रेकर्ड गर्नुहोस् - एक भिडियो परिचय सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको ईबुकको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ पाठकहरूको लागि आशाको साथ।
एक मार्केटिंग रणनीति विकास गर्नुहोस् - प्रभावकारीहरू, समाचार आउटलेटहरू, पोडकास्टरहरू, र भिडियोग्राफरहरू पहिचान गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको ईबुकको बृद्धि गर्नका लागि साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्। तपाईं यसको सुरूवात वरिपरि केही विज्ञापन र अतिथि पोष्टहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ।
ह्याशट्याग चयन गर्नुहोस् - वर्ष ईबुक अनलाइन को बारे मा जानकारी प्रचार र साझा गर्न को लागी एक छोटो, बाध्यकारी हैशटैग बनाउनुहोस्।
सुरूवात मिति चयन गर्नुहोस् - यदि तपाईं एक प्रक्षेपण मिति चयन गर्नुभयो र सुरूवात मितिमा बिक्री ड्राइव गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो ebook प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सबै भन्दा बेच्ने डाउनलोडमा यसको स्पाइकको लागि स्थिति।
तपाईंको ebook जारी गर्नुहोस् - ईबुक रिलिज गर्नुहोस् र साक्षात्कार, सामाजिक मिडिया अपडेट, विज्ञापन, भाषण, आदि मार्फत पुस्तकको पदोन्नति जारी राख्नुहोस्।
तपाईंको समुदायमा संलग्न हुनुहोस् - तपाईका अनुयायीहरूलाई धन्यवाद, व्यक्ति जसले तपाईंको पुस्तक समीक्षा गर्छन्, र यसलाई प्रतिध्वनि जारी राख्नुहोस् र यथासम्भव तपाई यसलाई प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ!
प्रो सुझाव: मैले भेटेका केही अचम्मका लेखकहरू प्राय: घटना र सम्मेलन आयोजकहरूले पुस्तकमा उनीहरूको उपस्थितिहरूको लागि खरीद गर्छन् (वा थप रूपमा) उनीहरूलाई कार्यक्रममा बोल्न भुक्तान गर्छन्। तपाईंको ईबुकको वितरण र बिक्री बढाउने यो उत्तम तरिका हो!
EPUB फाईल ढाँचा के हो?
तपाईको ईबुकको वितरणमा मुख्य कारकले ईबुकलाई डिजाईन गर्दैछ र यसलाई सबै विश्वव्यापी ढाँचामा सफा निर्यात गर्ने क्षमता छ जुन सबै अनलाइन पुस्तक स्टोरहरूले प्रयोग गर्न सक्दछ। EPUB यो मानक हो।
EPUB XHTML ढाँचा हो जुन .epub फाइल विस्तार प्रयोग गर्दछ। EPUB छोटो छ इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। EPUB बहुमत e- पाठक द्वारा समर्थित छ, र उपयुक्त सफ्टवेयर प्राय: स्मार्टफोन, ट्याबलेट, र कम्प्युटरहरूको लागि उपलब्ध छ। EPUB अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्रकाशन फोरम (IDPF) द्वारा प्रकाशित एक मानक हो र पुस्तक उद्योग अध्ययन समूह EPUB3लाई प्याकेजिंग सामग्रीको लागि रोजाईको एकल मानकको रूपमा समर्थन गर्दछ।
गुगल कागजातहरूमा तपाईको ईबुक पुस्तक डिजाईन गर्दै
प्रयोगकर्ताहरू प्रायः खोल्छन् Google कागजात र ढाँचा क्षमताहरुमा निर्मित को उपयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाईं एक ईबुक लेख्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हुनु पर्छ।
एक बाध्यकारी डिजाइन आवरण तपाईंको आफ्नै पृष्ठमा तपाईंको ईबुकको लागि।
तपाइँको ईबुकको लागि शीर्षक एलिमेन्ट ए मा प्रयोग गर्नुहोस् शीर्षक पृष्ठ।
Ebook शीर्षक र पृष्ठ नम्बरहरूको लागि हेडिings्ग र फुटरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
हेडिing १ तत्व प्रयोग गर्नुहोस् रaलेख्नुहोस् समर्पण यसको आफ्नै पृष्ठमा।
हेडिing १ तत्व प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको लेख्नुहोस् पावती यसको आफ्नै पृष्ठमा।
हेडिing १ तत्व प्रयोग गर्नुहोस् रaलेख्नुहोस् अगाडि यसको आफ्नै पृष्ठमा।
हेडिing १ तत्व प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँको लागि अध्याय शीर्षक.
प्रयोग गर्नुहोस् विषयसूची तत्व।
प्रयोग गर्नुहोस् फुटनोटहरू सन्दर्भको लागि तत्व। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग कुनै उद्धरणहरू वा तपाईं पुनःप्रकाशित गरिरहनु भएको अन्य सूचनाहरू पुनर्प्रकाशित गर्न अनुमति छ।
हेडिing १ तत्व प्रयोग गर्नुहोस् र एउटा लेख्नुहोस् लेखक को बारे मा यसको आफ्नै पृष्ठमा। तपाईंले लेख्नु भएको अन्य शीर्षकहरू समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंको सामाजिक मिडिया लिंकहरू, र कसरी मानिसहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्दछन्।
पृष्ठ ब्रेक सम्मिलित गर्न निश्चित गर्नुहोस् जहाँ आवश्यक छ। जब तपाइँ तपाइँको कागजातलाई तपाइँले कसरी चाहानुहुन्छ ठ्याक्कै हेरेपछि, यसलाई पिडिएफको रूपमा पहिले प्रकाशित गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई यो मनपर्दछ जस्तो लाग्छ।
गुगल कागजात EPUB निर्यात
गुगल कागजात प्रयोग गरेर, तपाईं अब लेख्न, डिजाइन गर्न र वस्तुतः कुनै पाठ फाइल वा कागजातबाट प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको गुगल ड्राईवमा सिधा अपलोड भयो। ओह - र यो नि: शुल्क हो!
गुगल डक्स प्रयोग गरी तपाईको ईबुक निर्यात गर्ने तरीका यहाँ छ
तपाइँको पाठ लेख्नुहोस् - आयात कुनै पाठ आधारित कागजात गुगल कागजात मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईको पुस्तकमा लेख्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् Google कागजात सिधा, आयात वा सिंक गर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजात वा कुनै अन्य स्रोत गुगल ड्राइव प्रयोग गर्न को लागी प्रक्रिया गर्न सक्षम छ।
EPUB को रूपमा निर्यात गर्नुहोस् - गुगल कागजातहरू अब EPUB एक नेटिभ निर्यात फाइल ढाँचाको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। केवल चयन गर्नुहोस् फाईल> को रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्त्यसपछि EPUB प्रकाशन (.epub) र तपाइँ जान तयार हुनुहुन्छ!
तपाईंको EPUB मान्य गर्नुहोस् - तपाइँ तपाइँको EPUB कुनै पनि सेवामा अपलोड गर्नु अघि, तपाइँ यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो ठीकसँग फर्म्याट भएको छ। एक अनलाइन प्रयोग गर्नुहोस् EPUB प्रमाणीकरणकर्ता तपाइँ कुनै समस्या छैन सुनिश्चित गर्न।
तपाईंको EPUB कहाँ प्रकाशित गर्ने
अब जब तपाईले आफ्नो EPUB फाईल पाउनुभयो, अब तपाईले ईबुक लाई धेरै सेवाहरु मार्फत प्रकाशित गर्नु पर्छ। गोद लिनका लागि शीर्ष आउटलेटहरू हुन्:
प्रज्वलित प्रत्यक्ष प्रकाशन - किन्डल डायरेक्ट पब्लिसि withको साथ निःशुल्क प्रकाशित ई-पुस्तकहरू र पेपरब्याकहरू, र अमेजनमा लाखौं पाठकहरू सम्म पुग्नुहोस्।
एप्पल पुस्तक प्रकाशन पोर्टल - तपाईले मन पराउनुहुने सबै पुस्तकहरूको लागि एकल गन्तव्य, र जसमा तपाईं बारे हुनुहुन्छ।
Google प्ले पुस्तकहरू - जुन फराकिलो गुगल प्ले स्टोर भित्र एकीकृत छ।
Smashwords - ईन्डी ईबुकको विश्वको सबैभन्दा ठूलो वितरक। हामी यसलाई छिटो, नि: शुल्क र कुनै पनि लेखक वा प्रकाशकको ​​लागि, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा, प्रमुख रिटेलरहरू र हजारौं पुस्तकालयहरूमा ईबुकहरू प्रकाशित गर्न र वितरण गर्नका लागि बनाउँदछौं।
म तपाईको पुस्तक परिचय गराउन भिडियो सामग्री रेकर्ड गर्न सिफारिश गर्दछु, सामग्रीमा अपेक्षाहरू सेट गर्दछु, र ईबुक डाउनलोड गर्न वा खरीद गर्नका लागि मानिसहरूलाई ड्राइभ गर्दछु। साथै, कुनै पनि प्रकाशन सेवामा एक महान लेखक बायो सिर्जना गर्नुहोस् जसले यसलाई अनुमति दिन्छ।
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु गुगल कार्यक्षेत्र.
टैग: अमेजनअमेजन पुस्तकहरुएन्ड्रोइडस्याऊस्याउ पुस्तकहरुई-बुकई-पुस्तकहरुEPUBइप्यूब रूपान्तरणइप्यूब कन्भर्टरEpub मान्यकर्ताइपब्लिकेसनगुगल ड्राइभGoogle प्ले पुस्तकहरूकसरीआईबुक स्टोरदलाललाइबेरियोईबुक प्रकाशित गर्नुहोस्ebup प्रकाशित गर्नुहोस्xhtml
MakeWebBetter: बनाउनुहोस् र WooCommerce को साथ तपाईंको Ecommerce व्यवसाय बढाउनुहोस् Hubspot
WordPress: तपाइँको ब्लग पोष्टमा एक एमपी3प्लेयर इम्बेड गर्नुहोस्
जुलाई १,, २०१ at १::24२ अपराह्न
महान पोष्ट, Thanx!
डिसेम्बर १, २०१92015:२:8 अपराह्न
के हामी गुगल डक्समा पुस्तक बनाउन सक्छौं?
डिसे 10, 2015 मा 12: 07 AM
म विश्वास गर्छु कि तिनीहरू अब एकै समान हुनुहुन्छ मरियम!
जनवरी 22, 2021 मा 9: 55 एएम
यो उल्लेखनीय छ। मलाई अब के चाहियो।
मार्स 20, 2021 मा 4: 49 एएम
उत्तम यो आश्चर्यजनक सहयोगी छ। धेरै धेरै धन्यबाद 🌹